Wasaaradda Caafimaadka XFS oo sheegtay Xaaladaha Covid-19 ee…
By axadle Last updated May 16, 2020
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka XFS ayaa soo gudbisay Warbixinta Kiisaska 48-tii saac ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyay Gudaha Soomaaliya, dadka dhintay iyo bukaanada horay looga helay ee ka caafimaaday.
Fawsiya Abiikar Nuur Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS ayaa xaqiijisay in la diiwaan-geliyay 73 xaaladood oo COVID-19 ah, 13 qof oo xannuunka ka boqsatay iyo 2 bukaan oo u geeriyooday.
Diiwaanka cudurka Coronavirus ee Soomaaliya marka la eego waxaa hoos u dhacay bukaanada Gobolka Banaadir oo kiisaska ugu badan looga dhawaaqi jiray, inkasta oo wali dad fayrusku haleelay laga helay.
Puntiland 25-ruux ayaa laga diiwaangeliya, Gobaladda Waqooyi 19, Gobalka Banaadir 17 iyo Koofur Galbeed 12-kiisas ah, Bukaannada cusub 51 kamid ah waa rag, halka 22-kalena ay yihiin Haween.
Xaaladaha cusub ee la helay waxa ay ka dhigtay 1,357 kiisas ah Covid-19 guud ahaan dalka, dhimashadu waxa ay gaartay 55-ruux, halka Bukaanada horay looga helay ee baarista kale mare isla markaana laga waayay ay gaareen 148.
Wasaaradda Caafimaadka XFS ayaa si maalinle ah usoo gudbisa natiijada Baariska Cudurka Coronavirus ee Soomaaliya, sidoo kale Dowlad Goboleedyada waxa ay ku dhawaaqaan dadka ay baaraan iyo isbadalka dhimashada, xaaladaha cusub iyo dadka bogsaday.